Batisa tany Tsiroanomandidy - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Batisa tany Tsiroanomandidy
Mbola mitohy hatrany ny famaranana ny fampianarana ny boky Apokalypsy ataon’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Ny Sabata 26 Novambra lasa teo dia tany Tsiroanomandidy indray no nanatontosana izany. Famaranana izay niarahana tamin’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol sy ny ankohonany. Mialohan’ny fotoam-bavaka lehibe ny sabata lasa teo, dia nisy ny kaoferansa izay notarihin’ny pasitera Mailhol. 170 kosa no vita batisa tamin’izany. Tsy ny tany Tsiroanomandidy ihany anefa no nanatontosana izany batisa izany fa ny faritry Vakinakaratra ihany koa. Mbola ny Sabata 26 Novambra 2011 ihany no nanaovana izany tany Antsirabe ka 48 no niroso tamin’ny ranon’ny batisa.
Isan’ny nanamarika ny Sabata lasa teo ihany koa ny fanokanana ny trano fivavahana vaovao tao amin’ny paroasy Ambohitrimanjaka. Ao Antaninandro Mariane no misy ity fiangonana vaovao ity, ary ny pasitera Alpha sy ireo komity avy eo amin’ny foibe Apokalypsy kosa no nitarika ny fotoana tamin’izany. Ho an’ny fiangonana foibe Ambohimarina Itaosy kosa dia ny pasitera Rija RANDRIANASOLO, tompon’andraikitry ny fiangonana any Bekily, no nitondra ny toriteny. Araky ny perikopa eo amin’ny Fiangonana Apokalypsy dia ny fiheverana ny hafa no lohahevitra tamin’io fotoana io.
Araka ny efa nampahafantarina antsika dia mandeha amin’ny Radio Fanambarana rehetra manerana an’i Madagasikara ny fampianarana ny boky Apokalypsy iarahana amin’ny pasitera Mailhol. Fa nahoana no ity boky ity no ampianarina fa tsy ny boky hafa ao amin’ny Baiboly? Ohatra oe Matio na Genesisy na Daniela sns… ny antony dia tsotra : sarotra ny mandray izay zavatra ambarany noho ireo sary an’ohatra maro samihafa hita ao. Ankoatra izay dia manambara loza sy zavatra mampatahotra ihany koa ny Apokalypsy. Ireo izay efa nanaraka izany fampianarana izany anefa dia mahita fa tsy ny Apokalypsy irery no hazavaina ao anatin’ny fampianarana fa ny Baiboly iray manontolo mihitsy. Miainga ao anatin’ny boky Apokalypsy ny zavamiafina sy tsiambaratelon’ny Baiboly iray manontolo sy ny tantaran’izao tontolo izao ary ny hiafarany. Mbola ao amin’ity boky farany ao amin’ny Baiboly ity ihany koa no misy ny ala olana amin’ireo loza maro samihafa izay mihatra, sy mbola ho avy eto amin’izao tontolo izao.
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao SamihafaÉtiqueté avec batisa, Tsiroanomandidy
Fitsidihana ara Pastoraly Paris – FRANCE